Ogaden News Agency (ONA) – Ergayga QM ee Somalia Nicholas Kay oo sheegay inay 7,000 oo Somali ah Soo Noqdeen ilaa Hadda
Ergayga QM ee Somalia Nicholas Kay oo sheegay inay 7,000 oo Somali ah Soo Noqdeen ilaa Hadda
Posted by Dayr	/ May 20, 2015
Ninka uga wakiilka ah Qaramada Midoobay dalka Somaliya Nicholas Kay ayaa sheegay inay ilaa hadda ka soo noqodeen dalka yemen qaxooti Somaliyeed oo gaadhay 7,000. Ergaygan oo warbixin siinayay Golaha Amniga ee QM ayaa isla markaa uga digay caalamka in sii fiican loo feejignaado, isagoo yidhi; waxaa dhic kara inay gurmad ka helaan Shabaabka kooxaha xag-jireenka ah ee Yemen inay dadka qaxootiga ah kusoo dhex dhuuntaan.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi;
“Waxaan u baahanahay in si aad ah loo ilaaliyo oo jawaab degdeg ah laga bixiyo haddii la arko in Shabaabka ay taageero ka helayaan kooxaha Yemen.”
Ergaygan ayaa sheegay in 7,000 ee Yimid Somaliya ay ku biirayaan dad gaadhaya 730,000 oo aan heli karin raashin maalmeedka ay u baahan yihiin, wuxuuna sheegay in baahida Somaliya ay gaadhay heer khatar ah.
R/wasaaraha Somaliya Cumar Cabdirashiid ayaa dhankiisa ka digay bishii lasoo dhaafay ee April in Qaacidada ka hawlgasha Yemen ay soo xaluulan doonaan Somaliya taasoo keeni doonta inay Shabaabka ku xoogyastaan Somaliya.
Itobiya oo aad ugu dheereysa ka faa’idaysiga xaaladaha kusoo kordha gobolka iyo isbadalada ka dhaca caalamka ayaa ilaa hadda ka aamusan xaaladda Yemen, inkastoo ay sheegtay inay qaxootiga jooga Yemen ee Itobiyaanka ah ay soo daadguraynayso.